I-Conscious Sedation Dentistry | Udokotela Wamazinyo Okungenabuhlungu
Kuthiwani Uma Uqinisekisiwe Ngomsebenzi Wamazinyo Ongenabuhlungu?
I-sedation eqaphelayo kanye nenduduzo ekulethayo yinto esiyinikeza iziguli zethu e-OptiSmile. Ukuthi ukulaliswa kokukhipha izinyo noma ukumane ubambe indawo encane ukuze ukhululeke ngokuphelele sinezindlela zokuqinisekisa ukuthi uthola ukwelashwa kwamazinyo okungabuhlungu eKapa.
Bhuka Ukubonisana Kwevidiyo Yakho Mahhala Manje
Kuyini I-Conscious Sedation?
Ukupholisa ingqondo luhlobo lwe-anesthesia esetshenziswa emahhovisi ezokwelapha/amazinyo. Kuyindlela ephephile nesimanje yokubulala izinzwa kusetshenziswa umuthi ofakwa emthanjeni futhi ngokuvamile isetshenziselwa ukuhlinzwa okuncane noma izinqubo ezimfushane, eziyinkimbinkimbi kancane lapho umjovo wokubulala izinzwa wendawo ungenele, kodwa izinzwa ezijulile ezijulile azidingeki. Kungachazwa njengokucindezelwa okuncane kokwazi. Umgomo wokudambisa ukwazi ukulawula ukukhathazeka nobuhlungu. Udokotela we-sedation uzosebenzisa izidakamizwa ezithile zokunciphisa ukukhathazeka / ubuhlungu ngesikhathi senqubo kanye nezidakamizwa ezizosiza ekulawuleni ubuhlungu obungemuva kokuhlinzwa uma kukhona.
Ilula Kangakanani I-Conscious Sedation?
Ngokungafani nokubulala izinzwa okuvamile okwenza iziguli ziquleke, ukulaliswa kwezinzwa kuvumela iziguli ukuba zisabele ezenzweni zazo udokotela wamazinyoimiyalelo, kuye ngezinga lokuthomalalisa. Iziguli ngokuvamile azikhumbuli inqubo. Ngokuvamile, izingane ezineminyaka engaphezu kwengu-3 ubudala zilungele lolu hlobo lwenqubo. Ukupholisa ingqondo kunciphisa ukuqwashisa kwengane ngenqubo yamazinyo. I-sedative (premed) ingase inqunywe ukuthi izingane zithathe ihora elilodwa ngaphambi kwenqubo yamazinyo ngaphansi kokulaliswa kokuzwa.
Ingane ejabule kakhudlwana igcina isimo sengqondo esihle mayelana nokunakekelwa kwamazinyo esikhathini esizayo. Abantu abadala abakhathazekile kanye neziguli eziye zaba nokuhlangenwe nakho okubi kwamazinyo bangamakhandidethi amahle wokuthobisa.
I-sedation eqaphile inikezwa udokotela obulala izinzwa oqeqeshiwe oqapha iziguli kuyo yonke inqubo. Izimpawu ezibalulekile ezinjengokushaya kwenhliziyo, ukuphefumula, umfutho wegazi kanye nokugcwala komoyampilo zibhekwa kuyo yonke inqubo. Ukunakekelwa okukhethekile kanye nokuqapha okuqhubekayo kweziguli ezibulawa izinzwa/ukulaliswa kuthuthukisa ukuphepha kweziguli, ikakhulukazi kulezo ziguli ezinezimo zezokwelapha ezihlelekile.
Ukwelashwa Kwamazinyo Kwamahhala - Induduzo kanye Nezindleko Eziphumelelayo
Ukupholisa ingqondo yethula enye indlela engabizi kune-anesthetic evamile (ngezinqubo ezithile). Ingenye ekahle esigulini esikhathazekile esesaba ukuzizwisa kwetiyetha okuhlukumezayo. Iziguli zibekwe esimweni esikhululekile, esinethezekile esivumela ukunakekelwa kwamazinyo ukuba kuhlinzekwe ngaphandle kokwesaba noma ukukhathazeka. Kuncane uma kukhona inkumbulo yenqubo. Akukhona nje kuphela ukuthi ukukhathazeka kuncishisiwe, kodwa iziguli nazo zibuyela ezinyaweni zazo ngokushesha, ngaphandle kwesikhathi eside sokululama se-anesthetic evamile. Imiphumela engemihle etholwa lapho umuntu equliswa i-sedation mincane kakhulu kuneye-anesthetic evamile - zimbalwa kakhulu iziguli ezithola noma yimiphi imiphumela emibi nhlobo.
I-sedation encane isiza iziguli ukuba zikhululeke, kuyilapho kungenzeka ukuthi ziphapheme. Isiguli kungenzeka siphendule imibuzo futhi silandele imiyalelo. Leli zinga le-sedation livame ukusetshenziswa lapho udokotela edinga ukuthi isiguli sihileleke kule nqubo.
Iziguli zizizwa zozela futhi zingase zizumeke phakathi nenqubo. Iziguli zingase zikhumbule noma zingakhumbuli enye yenqubo. Leli zinga le-sedation livame ukusetshenziswa lapho udokotela engadingi ukuthi isiguli sihileleke kodwa sisaqaphela.
Iziguli ngeke ziquleke, kodwa zizolala ngenqubo futhi ngeke zibe nenkumbulo encane noma zingabi nayo nhlobo nhlobo yokuyikhumbula. Leli zinga le-sedation linikeza isimo esiphelele sokuphumula nokunethezeka kuqeda ngokuphelele ukukhathazeka kunoma yisiphi isikhathi.
Ungenzenjani Nge-Perfect Smile?